တရုတ်နိုင်ငံက လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသယာဉ် Shenzhou-12 လွှတ်တင်ရန်ပြင်ဆင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုးချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာရှိ လွှတ်တင်ရေးစင်သို့ လွှဲပြောင်းလာသော Shenzhou-12 လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသယာဉ်နှင့် Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံတို့ပါဝင်သော ပေါင်းစပ်ယာဉ်အား ဇွန် ၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကျိုးချွမ်၊ ဇွန် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသယာဉ် Shenzhou-12 နှင့် Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံတို့ ပေါင်းစပ်ယာဉ်အား ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးနေရာသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသအေဂျင်စီ (CMSA) က ဇွန် ၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ လွှတ်တင်ရေးစင်တာရှိ အဆောက်အအုံများနှင့် ကိရိယာများမှာ အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် မလွှတ်တင်မီ လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးမှုများစွာနှင့် ပူးတွဲစစ်ဆေးမှုများကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း CMSA က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-06-09 21:17:43|Editor: huaxia
JIUQUAN, June9(Xinhua) — The combination of the Shenzhou-12 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket has been transferred to the launching area, the China Manned Space Agency (CMSA) said Wednesday.
1-7-The combination of the Shenzhou-12 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket is being transferred to the launching area of Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, June 9, 2021. The combination of the Shenzhou-12 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket has been transferred to the launching area, the China Manned Space Agency (CMSA) said Wednesday. The facilities and equipment at the launch site are in good condition, and various pre-launch function checks and joint tests will be carried out as planned, said the CMSA. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)